Trump: "Waxa uu ahaa nimco dhanka Ilaahay iiga timid" - BBC News Somali
Trump: "Waxa uu ahaa nimco dhanka Ilaahay iiga timid"
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku soo laabtay shaqadiisa waxa uuna shir jaraa'id ku qabtay xafiiska Oval wax ka yar hal todobaad ka dib markii laga helay cudurka coronavirus.
Madaxweynaha ayaan yeelan astaamaha lagu yaqaan 'Covid-19' wax ka badan 24 saacadood, qandho la'aanna waa in ka badan afar maalmood, sida uu sheegay dhakhtarkiisa, Sean Conley.
Farriin muuqaal ah oo uu soo duubay Arbacadii, ayuu Mr Trump ku sheegay inuu dareemayo "wax weyn", isagoo raaciyay: "Waxaan u maleynayaa inay tani ahayd nimco iiga timid Ilaahay."
"Tani waxay ahayd nimco qarsoodi ah - waan qabtay, waxa aan maqlay dawadan, waxaan idhi aan qaato, waana wax aan caadi aheyn," ayuu yidih, isagoo raaciyay inuu raadin doono ogolaansho isticmaalka deg degga ah ee daawadan.
Madaxweyne Trump wuxuu cusbooneysiiyey weerarradiisii Shiinaha, isaga oo u sheegaya dadka Mareykanka: "Waxba idinkama khuseeyaan. Adiga khaladkaaga ma ahayn in tan ay dhacday. Waxay ahayd Shiinaha khaladkiisa. wuxuu ahaa khaladka Shiinaha. "
Dadka ka ag dhaw madaxweyne Trump ee laga helay cudurka
Donald Trump Jr: Wiilka ka daran aabihii Trump
26 Agoosto 2020